#1 Register Account at Forum. - Myanmar Professor X - Page 1
#1 Register Account at Forum.
by MPX - 06-18-2020, 08:39 AM
အရင်ဆုံး ကျွန်တော် Forum မှာ Register လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Forum ရဲ့ Register လုပ်ရမယ့်နေရာကို သွားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးမြင်ရမှာကတော့ Register မလုပ်သေးခင်မှာ Forum ရဲ့ Home Page ကို မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Member Register Page ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Child Protect လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ COPPA Compliance ကို အရင်ဆုံး တိုက်စစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ထည့်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ Continue with Registration ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ Register Agreement. ကိုတောင်းယူပါလိမ့်မယ်။
I Agree နဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Account information တွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ပထမဆုံးအကွက်ကတော့ Forum မှာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရမယ့် UserName အကွက်ပါ။
ဒုတိယနဲ့ တတိယအကွက်တွေကတော့ Password နဲ့ Confirm Password လုပ်ပေးရမယ့် နေရာပါ။
၄ အကွက်နဲ့ ၅ အကွက်ကတော့ E-Mail Address ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး တူညီတဲ့ Register Process ပြီးတာနဲ့ Confirm လုပ်ဖို့အတွက် Mail လိပ်စာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Time Zone ကိုရွေးပေးပြီး နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Security Question ဖြေရမယ့်အကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေကတော့ "4" ပါ။ Human Verification ခံထားရတာကတော့ Forum မှာ Spam Register မလုပ်အောင်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် I'm Not A Robot ကိုဖြေပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ Referrer မှာကတော့ ဖိုရမ်ထဲက ကိုယ့်ကို Invite လုပ်တဲ့လူရဲ့ Username ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှ Invite မလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Submit Registration! ဆိုတဲ့ Button လေးကို နှိပ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်းခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Forum မှာ Register Complete ကြောင်း၊ Mail မှ တစ်ဆင့် Forum Account Confirm လုပ်ဖို့အတွက်ကို Mail ကို Link ပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Mail ကိုဖွင့်ပြီး Activate လုပ်ပေးရပါမယ်။ Gmail တွေအပြင်အခြားသော Mail Service အတွက်ကတော့ ဖိုရမ်မှ ပေးပို့လိုက်သော Mail ဟာ Spam Folder ထဲကို ရောက်တတ်တဲ့အတွက် အကုန်လုံးကို လိုက်ရှာကြည့်သင့်ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ &code=xxxxxxxx နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ Mail Link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Mail Confirmation Step ကို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်။ လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Forum ရဲ့ Home Page လေးကို စတင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ MPX ရဲ့ တရားဝင် Member ဖြစ်ပြီးတော့ အခြားသော Forum တွေမှာ ပါဝင် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ အဆစ်အနေနဲ့ Member Profile ကို Screenshot လုပ်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်မပြေမှုများရှိရင် Facebook Messenger သို့ လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Facebook Page: Myanmar Profess X
Thanks All!!! #MPX #MyanmarProfessX #AdultForum.